भाइरल झांक्रिले दुई बर्ष नबोलेको बालकलाई एकैरातमा बोल्ने बनाए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित ) – SUDUR MEDIA
April 8, 2021 April 8, 2021 AdminLeaveaComment on भाइरल झांक्रिले दुई बर्ष नबोलेको बालकलाई एकैरातमा बोल्ने बनाए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
भाइरल झांक्रि बेला बखतमा चर्चाको बिषय बनिनै रहन्छन् कहिले खाल्डो खनेर ला`श झिकेर त कहिले ढलेको मान्छेलाई समेत उठाएको भन्दै उनी चर्चामा आइन‌रहन्छन् । यसै बिचमा फेरि उनको चर्चाले निकै बजारमा ठाउँ ओगटेको छ ।
सरु तिमल्सिनाका छोरा जो बिगत साढे दुई बर्षदेखि नत हास्थे नै नत बोल्थे नै तर भाइरल झाक्रिले हिजो राति झारफुक गरिसकेपछि घर लागेका सरु र छोरा ,घर लाग्दै गर्दा बाटोमा ती बाबुले एकाएक हासेपछि सरुले ती बाबुलाई च्यापेर फेरि ती भाइरल झाक्रि समझ ल्याएकि छिन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्री: